Ibhere likulindile endlini eneziko labantu abangu-2-4
Le ndawo itholakala edolobhaneni elithulile laseBobruisk, elizungezwe amahlathi acebile nezilwane zasendle, ogwini oluhle futhi olucezile lweLake Krivoye. I-Minsk iqhele ngamakhilomitha angama-200. Ezindaweni eziseduze kukhona amachibi iBeloe, Okunevo, Bobrovo, Ksenzovo. Ukuze ungalahleki, kungcono ukugxila edolobhaneni lasePsuya, lapho uzodinga ukujika khona ku-Mira Street. Ngaphezu kwalokho, ngokoqobo amakhilomitha angu-5 eduze komgwaqo omuhle wehlathi - futhi ulapho.
Indlu encane yebhere, elungele imibhangqwana noma inkampani enesizotha. Indlu yomndeni ingahlala abantu abangafika kwabangu-4. Igumbi lokulala linombhede ophindwe kabili kanye nombhede kasofa. Iziko elikhulu linikeza uthando olukhethekile ekhaya lomndeni.
jabulela indawo enokuthula noma uthathe uhambo oluya echibini ngezinsimbi zalo ezihlomele. Endleleni eya echibini, esiqhingini, uzohlangana nabakhileyo bendawo - izimbuzi zaseCameroon, ezingeke zishiye abantu abadala noma izingane ezingenandaba.
Kuzivakashi ezisencane, ikhaya linenkundla yokudlala enamaswing kanye ne-trampoline. Futhi eduze kwayo kukhona ukucaca ngezibonakaliso ze-zodiac, lapho kuhle ukuhlala nabangane futhi ucule ngesiginci.
Angikwazanga ukuzibamba kodwa ngahlala endaweni yefa kanye nendlu yokugezela yaseRussia phezu kwezinkuni. Ngesikhathi kwakhiwa indlu yokugezela endaweni yaseMedvezhy Ugol, akukho nsimbi eyasetshenziswa, amatshe kuphela. Ukugeza kushisa isikhathi eside (cishe amahora angu-5-6), kodwa futhi kugcina izinga lokushisa isikhathi eside. Kukhona negumbi lokuphumula eliqotshiwe kanye neshawa.
i-trampoline, ukugibela ibhayisikili, ukukha amakhowe namajikijolo, ukuhamba endaweni ezungezile, ukudoba, ukuzingela, ukuphumula emanzini, ukugibela amahhashi, ukugibela izikeyi, ukushushuluza inja, uhambo lwamanzi.
Sizohlangana nawe nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Sizophendula yonke imibuzo yakho.
Sizokumemela endaweni yethu, sizokunikeza itiye le-herbal, sizokuphatha ngesitshulu senyamazane))
Sihlela uhambo oluya endaweni yamandla, eduze komzila "Velesov Way", amakilasi amakhulu
Sizokumemela endaweni yethu, sizokunikeza itiye le-herbal, sizokuphatha ngesitshulu senya…